ကျွန်မနှင့် ဆံပင်ပုံစံများ ~ စန္ဒကူး
ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀အကြောင်းတွေအကုန်တစ်ထိုင်တည်းမမှတ်မိပေမယ့် အကြောင်းရာတိုက်ဆိုင်တိုင်း တွေးမိတိုင်းသတိတရ အောက်မေ့ ပြုံးမိပါသေးတယ်။
ကျွန်မမွေးတော့ မာမီက အသက် ၂၀ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ မမွေးခင်တစ်ပတ်အလိုစနေနေ့မှာစပီး ဗိုက်နာလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရတာ (မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာပေါ့) နောက်အပတ် စနေနေ့ မှကျွန်မကိုမွေးတယ်။ တစ်ပတ်လုံး ဆေးရုံပေါ်မှာ နာလိုက် အော်လိုက်ဖြစ်နေမယ်ထင်တာပါဘဲလေ..တွေ့မှမတွေ့ရသေးဘဲ..း)
ကျွန်မကိုမွေးတော့ ၉ပေါင်ခွဲ.. ဆံပင်တွေက ကုတ်နားမှာဝဲနေအောင်ရှည်သတဲ့လေ...အဖေ့ဘက်က အဖွားအဲ တုန်းကရှိသေးတယ်..ကျွန်မကိုသူဘဲကြည့်၊ သူဘဲထိန်း၊ အလိုလိုက်လို့ ကျွန်မကဆိုးသတဲ့လေ..
ကျွန်မသိတတ်တဲ့အရွယ်မှာ အဖေ့ဘက်ကအဖိုးအဖွားမရှိတော့ပါဘူး..အသက် (၆၀)၀န်းကျင်မှာ နှစ်ယောက်လုံး သွေးတိုးနဲ့ဆုံးသွားပါတယ် (ပြင်ဦးလွင်မှာပေါ့)။ သူတို့ပေးတဲ့ အမွေ သွေးတိုး ကိုကျွန်မကျေကျေ နပ်နပ်ကြီးလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အချစ်ဆုံးမြေးဦးပေကိုး...
ကျွန်မသိတတ်တဲ့အရွယ် သူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းမရှိ ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်သာအဖော် အဖြစ်ရှိနေပီးတော့ အသက် (၄) နှစ်နဲ့ သူငယ်တန်းကို အိမ်ကတန်းပို့လိုက်ပါတယ်။
ဆံပင်တွေထူပီးရှည်လွန်းလို့ ခဏခဏ ညှပ်ရတဲ့ကြား ကျောင်းသွားရင်လဲ မာမီက ဆံပင်ကို လေးချောင်းခွဲ ပီး တင်းနေအောင်ချည်ထားပေးပေမယ့် ကျောင်းကပြန်လာရင်တော့ စုတ်ဖွားနဲ့ ပြန်လာပါတယ်။
ဇီးကွက်လိုပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘဲထိုင်နေတော့ အခြားကလေး တွေလဲ အမြင်ကတ်တော့မပေါ့...ဆံပင်တစ်ယောက်လာဖွ၊ နောက်တစ်ယောက် သရေပင်လာဆွဲချွတ်နဲ့၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကိုဖြိုးလား... အားကိုးရမလားမှတ်တယ်.. ကျွန်မငိုရင် သူပါလိုက်ထိုင်ငိုနေရော..
(၄) တန်းလောက်တုန်းက ကျွန်မဆံပင် အထူကြီးအရှည်ကြီးပဲ..အဲဒါမှတ်မှတ်ရရ မာမီကတစ်ရက် ညှပ်ဖို့ ဆိုင်ခေါ်သွားတော့ ဆံပင်နောက်မှာထိုင်ခိုင်းတာ.. စက်ဘီးစနင်းမှ ခုန်တက်မယ်ဆိုပီး.. မာမီစက်ဘီး ပေါ်လဲ တက်ရော ကျွန်မ နောက်ကနေ စက်ဘီးကိုတွန်းလွှတ်ပီး အနောက်လှည့်ပြေးတာ..လဲ အရိုက်ခံရတယ်။
(၆) တန်းရောက်တော့ ဆံပင် ကို မာမီ က ဘေးနှစ်ချောင်းကျစ်ပီး အနောက်ကိုဆွဲချည်ထားပေတော့မြန်မာ ကားတွေထဲက ဖက်ဆစ်ဂျပန်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတာနဲ့တူလို့ထင်ပါတယ် ကျောင်းသားတွေက ဖက်ဆစ် ဂျပန်မလို့ဝိုင်းအော်ကြတာနဲ့ ရှက်လို့ ငိုပီးအိမ်ပြန်လာတာ၊ မာမီ့ကို နောက်ဆို အဲလို ဆံပင်ပုံမျိုးမလုပ်ပေး နဲ့ ဆိုပီး ဆန္ဒပြတာ.. ညနေထမင်းမစားဘူး။
မာမီကတော့ အငယ်နှစ်ယောက်လဲငယ်သေးတော့ ဂရုမစိုက်အားပေမယ့်ပါးပါးကတော့ ညသန်းခေါင်လဲ လာနိုးပီး ထမင်းအတင်းခွံ့ကျွေးတတ်ပါတယ်။
သမီးဦးဆိုတော့ အိမ်မှာလဲ အငယ်နှစ်ယောက်ရှိတော့ ပါးပါးက ခရီးထွက်တိုင်းခေါ်ခေါ်သွားတော့ ကျွန်မကို ယောက်ျားလေးလိုဘဲအမြဲဝတ်ပေးပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အချိန်တွေဆို သူဘဲ
အလှပြင်ပေးတယ်၊ မျက်ခုံးတွေဆို အကုန်ရိတ်ပီး ကွမ်းရိုးနဲ့ဆွဲထားပေးလို့ အခုမျက်ခုံးမွှေးနဲနဲရှိသလို၊ သနပ်ခါးလိမ်းပေး၊ ခေါင်းဖီးပေး.. အကုန် အဖေဘဲကျွန်မကိုလုပ်ပေးပါတယ်..
အထက်တန်းလောက်ရောက်တော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေပြပြလာတော့ ခေါင်းကအဆိုးဆုံး၊ ကိုက်ပီး နာနေရင် တစ်နေကုန်.. ဒါနဲ့ပဲ ရွှေဘုံသာလမ်း ဦးနှောက်အာရုံကြောဆရာဝန်မနဲ့သွားပြတော့ သွေးကြော တွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား ဆေးပေးလိုက်ပါတယ်.. ဆံပင်ပါညှပ်ဖို့ ကအဆစ်ပါလာပါတယ်...
ကျောင်းပီးခါနီးအရှည်လေးထားလိုက်ပါသေးတယ်.. မအောင်မြင်ပါဘူး.. ဆေးရုံပေါ်ရောက်တော့ ညှပ်ပစ်ရ တာပါဘဲ..
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြွက်စုတ်ကေလေးနဲ့ နေရင်း.........ကောက်လိုက်.. ဖြောင့်လိုက်..ဖြစ်နေတဲ့ဆံပင် ကိုစိတ်တိုင်းမကျတာတော့အမှန်ပါ..ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ နေဖြစ်တဲ့ဆံပင်ပုံစံလေးတွေပါ.. ဘယ်ဟာနဲ့ လိုက်မလိုက်တော့မသိဘူး... ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးဆံပင်ပုံဆံက စပရိန်လို ကောက်ကောက်လေး ကျောလည်လောက်ရှည်တဲ့ပုံဆံမျိုး...
ဒါမှမဟုတ်လဲ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ဆံပင်ကို အမြင့်ကြီးအားလုံးစုပီး ပြောင်နေအောင်ချည်ထားတာမျိုး...
ရုံးသွားတဲ့အချိန်တော့ မျက်လုံးနဲ့မျက်နှာပေါ်ဆံပင်မအုပ်အောင် အနောက်ကိုဆွဲပီး ဆံထိုးနဲ့ထိုးတာတယ်။
စိတ်လိုလက်ရရှိရင် ဆံပင်လေးတွေညကတည်းကခွေထားပီး ပွဲလန်းသဘင်နဲ့ ဘုရားကျောင်းသွားတယ်..
တစ်နေကုန်အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်ရမယ်ဆို အဆင်ပြေသလို မရှုပ်အောင်လိမ်ကျစ်ထားလိုက်တာဘဲ..
ခေါင်းနာလို့ဆံပင်အကုန်ချည်နိုင်တဲ့ နေ့တွေဆို မျက်နှာပေါ်မကျအောင်ရှေ့နဲ့ နားတစ်ဝှိက်ဆံပင်တွေ ကို လိမ်ပီးနောက်မှာစုပီးချည်ထားတယ်။။ စိတ်ရူးပေါက်ပီး ဆံပင်ကိုခွေခေါက်အောင်ကောက်လိုက်သေးတယ်..
နောက်ပိုင်းခေါင်းလျှော်ပီးဟိုထည့် ဒီထည့် ဆံပင်သနေရတာစိတ်မရှည်လို့ ပြန်ဖြောင့်လိုက်ပြန်ရော..
ကျွန်မအရင်ကဆံပင်သန်ပေမယ့် ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်လို့ သိလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မဆံပင်က weight မရှိတာကြောင့် ပေ့ါပါးပီး ခူယားကောင်အမွှေးလိုဖြစ်နေပါတယ်... ဆံနွယ်လေးတွေသေးတာလဲပါ တယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေဆို ဆံပင်တစ်ပင်တစ်ပင် အကြီးကြီးပဲ..သန်တယ်လို့ဘဲပြောရမလားမသိဘူး။ ကျွန်မဆံပင်က ၀ါကြောင်ကြောင်နဲ့ ဖြောင့်စင်းနေပေမယ့် ပေါ့လွန်းတော့ လေနဲနဲတိုက်တာနဲ့ စုတ်ဖွားဖြစ်နေပီ။ ဆီလိမ်းရင်လဲ ကပ်နေပြန်ရော.. ကိုယ်တိုင်က မလုပ်တတ်တာလဲပါတယ်.. အဆင်ကို မပြေပါဘူး...ပုံအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတဲ့ဆံပင်ပုံတွေနဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လက်ကလိထားတဲ့ ဆံပင်ပံစုံလေးတွေကိုပါ အပျင်းပြေကြည့်လို့ရ အောင်တင်ထားပါတယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 3:59 AM
ဒုတိယမြောက် အခွေအလိပ်ရယ် တတိယမြောက်အပြောင်လေးရယ် အကြိုက်ဆုံးပဲကွယ်
ဆံထုံးထုံးတာတဲ့ပုံလေးကြိုက်တယ် ဘယ်လိုထုံးလဲ ထုံးတတ်ဘူး ....ထောလည်းအဲလိုပဲ ဆီလိမ်းတော့ကပ်နေရော မလိမ်းတော့ဖွာနေရော ဆံပင်က ကားဂိတ်ရောက်ရင် အိမ်ကဖီးလာသလို အဆင်မပြေတော့ဘူး ပွနေရော ဆံပင်ကိုတော့ မကူးလို မလုပ်တတ်ဘူး အားလုံးရိုးရိုးစုချည်တာတောင် မနဲလုပ်ယူရတယ် (တော်ချက်ကတော့ကမ်းကုန်) အတိုတော့ငယ်ငယ်ကပဲထားတယ် ကြီးတော့အရှည်ပဲထားတယ် ခုဆို အဖျားမှာ ၂ခွမက၃ခွ၎ခွတွေဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်ရတယ် ဆံပင်တွေကလည်းကျွတ်မှကျွတ် :(
လုပ်တတ်ပါ့ ဆံပင်ဆိုတခါမှ ဂုတ်ရောက်အောင်မတိုဖူးဘူး
ဒါနဲ့ ကူးကူးစ်ရေ....
ဟုတ်မှာပါလေ မြူးတို့ ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူး
မြူးတို့ မြန်မာပြည်က နေထွက်လာတာ
၁၁ လပိုင်းဆို ၁၂နှစ်ပြည့်ပါပြီ
မြူးမသိပါဘူး နောက်ပိုင်းမှ ဖွင့်တာဖြစ်မှာပါ
ကူးကူးက ဆံပင်ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်တတ်တယ်နော်
တော်တယ်။တို့ တော့မလုပ်တတ်လို့ ဂုတ်နားထိဘဲ
ဘာစတိုင်တွေလည်း တော.သိဘူး ကြည်.သာကြည်.
သွားတာ ဘာမှသိဘူး ဟီးးးးးးးးးး
လုပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် ခေါင်းကိုင်းရင်အိပ်ငိုက်လွန်းတာကြောင့် တော်ရုံမလုပ်ဖြဟ်ဘူး။
သေချာတာကတော့ ကူးကူးလောက် လှမယ်မထင်ဘူး။
ခြောက်တယ် ပါးလဲ ပါးတယ်
နောက်ဆုံးပုံကလို ဆံထုံးလေး ဘယ်လိုထုံးလဲ ... ???
ပြောပါ ပြောပါ..လူကို အူယားအောင်လာကလိတယ်... နဂိုကမှ လက်တည့်စမ်းချင်ရတဲ့ အထဲ... :P
မွှေးနီလို့ ခေါ်ရမယ်။ ဟဲဟဲ။
ကူး ဆ့ပင်သားပြောင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ.. မီးချစ် ဆို ခဏခဏ စက်နဲ့ဖြောင့်လို့ ထင်တယ်.. အရောင် က မထွက်တော့ ဘူး.. အတို ညှပ်ရတော့ မယ်
ကူးကူးနဲ့မမနဲ့ဆံပင်သားချင်းတူတယ်.... ဆံလုံးသေးပြီး ဆံပင်များတယ်... ဝိတ်မရှိတော့ ဘာပုံသွင်းသွင်း ခဏဘဲခံတယ်.... ကောက်လိုက် ဖြောင့်လိုက်နဲ့ စိတ်တိုင်းကျတယ်ကို မရှိဘူး
ကူးရေ နာ့ကတော့ ဆံပင်ကိုစည်းရမှာ ပုံသွင်းရမှာ ပျင်းလို့ အမြဲတမ်း ဖျားလျားချချထားလို့ အိမ်မှာဆို ခဏခဏ အဆဲခံရတယ်။ ဆံထုံးလေးတွေ မိုက်တယ်နော်။ စလုံးရောက်ရင် အဲလိုမျိုးလေးတွေ ထုံးပေးနော်။ ငယ်ငယ်ကတော့ အဒေါ်ငယ်က ဆံပင်ကိုအမျိုးမျိုး စည်းပေးဖူးတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်ဘာသာမလုပ်တတ်တော့ ဆံပင်ရှည်ပေမဲ့ ဆံထုံးလေးတောင် မထုံးတတ်ဘူးအေ့